voambolana fitantanana – Blaogin'i Voniary
Étiquette : voambolana fitantanana
Fanatontoloana sy haitao vaovao
Lahatsoratra nosoratan'i Avotriniaina Stannie, nahazo ny laharana voalohany tamin'ny fifaninana lahatsoratra blaogy - Teny Gasy 2.0 taona 2019
Hanolotra santionam-boambolana Malagasy hanampy ireo izay efa anananao indray aho androany. Jereo ato ireo efa nivoaka teo aloha: 1- Voambolana fampiasa eo amin’ny tontolon’ny fandraharahana sy ny fitantanana 2- Voambolana fampiasa eo amin’ny tontolon’ny fandraharahana sy ny fitantanana Velona ny teny Malagasy Maro ny milaza fa sarotra ny teny gasy. Ao koa ireo nanatsatso avy hatrany raha... Lire la Suite →
Miroso hatrany isika amin’ny ezaka fampiasana voambolana malagasy eo amin’ny sehatra maro samihafa. Ny tanjontsika dia ny hamelona sy hampivoatra hatrany ny teny malagasy izay tenim-pirenentsika. « Ny teny ifaneraserana, ifanabeazana, ifampitondrana dia mitondra aina satria ny serasera no antoky ny fifankazahoana izay ifotoran’ny fahaizana miara-monina sy ny fiandrianam-pirenena » Hoy ny Tambajotra Sangambita. Alao hery ary... Lire la Suite →
Azo atao tsara ny mampiasa teny gasy eo amin’ny sehatr’asa rehetra. Ny Foibe momba ny Teny ao amin’ny Akademia Malagasy efa miezaka rahateo mamorona teny vao mifanaraka amin’ny zava-misy ankehitriny. Anio dia miantefa manokana amin’ireo mpiandraiki-draharaha sy tompon’andraikitra isan-karazany ny hafatra. « Fa angaha Aho voatery hiteny gasy e! » Izay angamba no ao an-tsaintsika izay zatra mampiasa teny frantsay. Hoy... Lire la Suite →